Ku: Mudane Abdullahi Yusuf Ahmed, Madaxweynaha DKFS
Ku: Mudane Ali Mohamed Gedi, Ra’iisal wasaaraha DKFS
Ku: Mudane Sharif Hassan Sh. Adan, Guddoomiyaha Baarlamaanka DKFS.
25ka December 2004
Ururka Somali Concern Group si aad iyo aad ah ayuu uga murugeysan yahay xaaladda uu waddanka maanta ku sugan yahay, welwelka aan qabno darteed ayaan u aragnay inay ku habboon tahay inaan warqad furan idiin soo gudbino taasoo aan ku caddeynayno welwelkayaga.
Sidaan horeyba 21kii November 2004 talooyin ugu soo jeedinay dowladda, ayaan mar walba diyaar ugu nahay inaan ugu soo jeesanno sidii loo horumarin lahaa waddanka, looguna howlgeli lahaa wax qabad dhab ah oo wax tar u leh shacabka Soomaaliyeed. Waxaad ogaataan inaad mas’uuliyad culus aad u qaaddeen shacabka Soomaaliyeed, ha yeeshee aad moodo in shakiyo badan ay soo baxayaan maalinba maalinta ka danbeysa.
Waxaa muhiim ah inaad noqotaan shaqsiyaad dhowra sharciga, illaaliya hantida ummadda soomaaliyeed. Mas’uul waa kan danta gaarka ah ka horumariya tan guud, isla markaana ogaada rabitaanka shacabkiisa. Waxaad maanta heysataan fursad qaalli ah oo aad dhabaha saxda ah ku qaadaan idinkoon u qaraabo kiilin dano gaar ah. Mas’uul waa kan dadka dhibka ka saara oo u horseeda dhabbo suuban oo ku dayasho mudan.
PDF Format | MS-Word format
Maalintii 21kii December, hayadda caalamiga ah ee la yiraahdo International Crisis Group (ICG) waxey soo saareen warbixin muhiim ah oo la magac baxday “Somalia: Continuation of War by Other Means?” oo ay ku soo jeediyeen talooyin macquul ah oo muhiim u ah waddanka, sidaas daraadeed waxaan jeclaan laheyn in xubnaha baarlamaanka ay ka doodaan oo tallooyin muhiim ah ka soo saaraan. SCG waxey aaminsanyihiin in nuqulkan uusan wada saxsaneyn, ha yeeshee talo soo jeedintooda ay macquul tahay una aragno fursad xukuumadda iyo baarlamaankaba bilow ugu noqota doodooda.
SCG waxey idinkula talineysaa inaad tallooyinkii aan horey idiinkugu soo jeedinayna aad tixgelisaan, lana timaadaan horseed cusub oo waxtar shacabka u leh. Mas’uuliyiinta dowladda ee la dooranayo waa in lagu saleeyaa aqoon, karti, waayo aragnimo shaqo, lalana xisaabtamo. SCG waxey talo ku soo jeedineysaa in sharciga loo dhowro sida uu yahay oo aan markii larabana laga faa’iideysan. Ogaada in ummaddu ay idin wada fiirsaneyso oo noqda kuwii isku kalsoonaada oo shacabka soomaaliyeed siiya mudnaanta koowaad.
SCG waxey talo ku soo jeedineysaa in barnaamijka dowladda uu noqdo mid shaqsi walba oo soomaali ah uu heli karo, si xisaabtanku u noqdo mid loo wada jeedo. Sidoo kale xildhibaanada marka ay doodayaan waa inay si cilmiyeysan oo sharciga waafaqsan u fuliyaan howlaha horyaalla, ogaadana aragtiyaha lagu kala duwan yahay waa faa’iidada horumarka. Xildhibaanadu waa iney la yimaadaan firfircooni dheeraad ah oo ay danta guud ka horumariyaan danta gaarka ah. Dhamaan xildhibaanada waa in tababarro joogta ah loo fidiyaa si habsami u socodka howlahoodu uu ugu fududaado.
SCG waxey jeclaan laheyd dowladda iyo baarlamaanka oo waddanka gudihiisa taga sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo gacmaha iswada heysta. Sidoo kale waa inaad Somalida dibedda joogta aad ka codsataan inay waddanka dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa ay kaalintooda uga aadan ka qaataan. Sidoo kale shacabka soomaaliyeed ee gudaha jooga waa inaad si dhab ah oo kal iyo laab ah ula hadashaan una caddeysaan inaad iyaga u shaqeyneysaan, kana codsataan wada shaqeyn dhab ah. Waxaan aaminsanahay in shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ay kaalin firfircoon ka qaadan karaan dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska waddanka.
Mudanayaal, waxaan idiin rajeyneynaa inaad xilkiina u gudataan si dhab ah oo aad fulisaan dhaarta aad u dhaarateen xilka. SCG waxey idiin rajeyneysaa in EEBBE idinku garab galo howshiina, ogaadana waxaan ugu horreynaa hay’adaha ama shaqsiyaadka idin la xisaabtami doono.